सहकारी क्षेत्रको ठगी रोक्न कर्जा सूचना केन्द्र, यसले कसरी काम गर्छ ? | गृहपृष्ठ
Home समाचार सहकारी क्षेत्रको ठगी रोक्न कर्जा सूचना केन्द्र, यसले कसरी काम गर्छ ?
on: May 04, 2019 समाचार
वैशाख २१, काठमाडौं । एउटै धितोलाई विभिन्न सहकारीमा धरौटी राखेर वित्तीय अनियमितता गरी सर्वसाधारणको रकम ठग्ने कार्यलाई निरुत्साहन गरिने भएको छ । त्यसको लागि सहकारीमा सदस्यको निक्षेपमा बढदै गएको जोखिम न्यूनीकरण गरी यसलाई सुरक्षित तथा थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ । यसले राख्ने सूचना पारदर्शी भई उनीहरुको लगानी सुरक्षित हुनेछ ।
यसअघि ओरेन्टल, गुण, एक्जिम, परिदृश्यलगायत केही सहकारीले सर्वसाधारणको करीब रू. १० अर्बभन्दा बढी निक्षेप ठगी गरेको उजुरी परेको भए पनि कारवाहीको प्रष्ट नियमको अभावमा कारवाही तथा निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । केही वर्ष अगाडि ५० सहकारीलाई समस्याग्रस्त संस्थाका रूपमा सूचीकृत गरिएको भए पनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे समस्या देखिएको छ ।
सहकारी विभाग र सहकारी पत्रकार समाजले शुक्रवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहकारीका माध्यमबाट हाल देशभर रू. ३ खर्ब २ अर्ब निक्षेप संकलन भई रू. २ खर्ब ७३ अर्बको लगानी भएको जानकारी दिइयो । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा अहिलेसम्म करीब रू. ७३ अर्बको शेयर पूँजी कायम छ । यस क्षेत्रबाट निष्क्रिय पूँजीलाई बचत गरी वित्तीय पहुँच नपुगेकालाई विभिन्न वस्तु उत्पादनमा सहयोग तथा सेवा प्रदान भइरहेको छ ।
मुलुकको परिवर्तित संरचनामा स्थानीय तहका सबै वडामा कारोवार गर्ने सहकारीलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखिएको छ । एउटा स्थानीय तहमा दर्ता गरिएको सहकारीले अर्को स्थानीय तहमा कारोवार फैलाएमा प्रादेशिक सरकारकोअन्तर्गतमा पर्नेछ । एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कारोवार गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेका सहकारीलाई संघीय सरकारले नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त नियमावलीले सहकारी विभागलाई केही अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । विभागले सहकारीलाई प्रशिक्षण, उत्पादन, बजार, वितरणसँग जोडने कार्यका साथ समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, सञ्चालकको खाता रोक्का, सञ्चालक र सरोकार पक्षको राहदानी रोक्ने, संस्थाको व्यवस्थापनका लागि हस्तक्षेप गर्न सक्ने, व्यवस्थापन समिति बनाउनेलगायत अधिकार नियमावलीमा गरिएको बताइएको छ । रासस
कर्जा सूचना केन्द्रलाई सार्थक बनाउने हो भने …
दोलखाका सहकारीमा ६ सय रोजगार